Botswana | Wararka Safarka
Mid ka mid ah meelaha safarada waaweyn loo tago ee Afrika waa Botswana sababtoo ah xayawaanka duurjoogta ah ee halkan ku nool. Wiyisha iyo Badaha ku nool biyaha ayaa si xor ah uga socda dalkan Afrikaanka ah, sidoo kale bisadaha waaweyn iyo eeyaha Afrikaanka ah ee halista ku jira. Si kastaba ha noqotee, haddii ay jirto sabab uu Botwana caan ugu yahay adduunka waa sababta oo ah maroodiyaal badan ayaa laga heli karaa halkan marka loo eego meel kasta oo kale oo ka tirsan qaaradda.
Haddii xoolaha nool ay ku darsadaan waxaan ku dareynaa inay tahay dhulka Okavango delta iyo lamadegaanka Kalahari, halkaas oo ay ku taal meel ka mid ah meelaha ugu badan ee farshaxanka dhagaxu ku yaal adduunka, waxaannu ku soo gabagabeynaynaa in Botswana ay tahay mid ka mid ah waddamada ugu caansan. meeraha. Waxaan ku ogaaneynaa dhammaan waxyaabaha ay Botswana bixiso, boostada soo socota.
3 Lamadegaanka Kalahari
4 Dadka San
5 Beerta Qaranka Chobe
6 Xogta xiisaha
Sababta ugu weyn ee loo booqdo Botswana waa safaris laakiin Gaborone had iyo jeer waa xiiso leh in la arko. In kasta oo ay tahay magaalada ugu weyn dalka, haddana waa wax la yaab leh in ay tahay mid ka mid ah caasimadaha ugu dadka yar Afrika iyo meel aad u caqli badan. Waa magaalo ay ka buuxaan xaafado la deggan yahay, xarumo laga dukaameysto, dhismayaal dowladeed, iyo matxafyo xiiso leh. Marka laga hadlayo soo-jeedinta gastronomic, Gaborone waa mid aad u kala duwan. Kuwa ugu dhiirran ayaa leh waajibaadka halkan leh dirxi mopane ah.
Gobolkan, oo lagu tilmaamo "Dheeman Kalahari", waa dhul geddisan oo ka soo horjeedda uumiga guud ee dalka iyo mid ka mid ah nidaamyada ku-teedsan badda adduunka ee aan lahayn marin looga baxo badda. Muuqaalkeeda iyo duunyadeeda duurjoogta ah ayaa sida ugu fiican looga mahadceliyaa hawada, in kasta oo wadnaha Delta laga heli karo jeep.
Kooxo pachyderms ah oo ku wareegaya baaxadda dhulkeeda, lo'da lo'da ah ee ku dhex socda biyaheeda cad, ama giraafyada ku dhex soconaya acacias waa aragtiyo u gaar ah koonyo yar oo lix bilood sannadka ay daadadku la socdaan. Tani waa sababta ugu weyn ee Okavango Delta si wanaagsan loo ilaaliyo.
Cidladani waxay ku fidsan tahay Botswana, Namibia iyo Koonfur Afrika hooska deriskeeda Namib. Waxaa loo yaqaanaa lamadegaanka casaanka sababtoo ah midabka ciideeda inkasta oo ay xaalado aad u daran ku jiraan, libaaxyada, hilbaha jiirka, jiirka, Geriga iyo antelopes, iyo noocyada kale, waxay ku nool yihiin Kalahari. Meesha ay cimiladu ka qoyaan badan tahay, waqooyiga woqooyi, roobabku waxay u banneeyaan geedaha savanna iyo kiaat qallalan.
Meel aad u xiiso badan oo ka mid ah lamadegaanka Kalahari waa dhul qiyaastii ah toban kilomitir oo laba jibbaaran halkaasoo in ka badan 4.500 oo sawir gacmeed lagu keydiyo ay sameeyeen bulshada San. Qaarkood waa 24.000 oo sano waxaana loo abuuray inay allabari u bixiyaan.
Marka laga hadlayo dadka San, joogitaankoodu wuxuu dib ugu soo laabtay taariikhda 20.000 ee waqtiga koonfurta Afrika. Mid ka mid ah waayo-aragnimada ugu xiisaha badan ee laga helo Botswana waa inaad waqti la qaadato asal ahaan dadkii degganaa koonfurta Afrika. Midka ay tixgeliyaan dad badan oo socdaal ah caasimadda Botswana ee Kalahari, Ghanzi, wuxuu leeyahay xarumo farshaxan iyo dukaamo farshaxanno San ah, oo aad u xiiso badan.
Beerta Qaranka Chobe
Mid ka mid ah xayawaanka duurjoogta ah ee ugu badan qaaradda ayaa halkan ku urursan. Khibrad u yeelashada ku dhoofitaanka qorrax dhaca inta lagu guda jiro biyaha dagan ee Wabiga Chobe, oo kala qaybiya Botswana iyo Namibia, iyadoo leh shimbiro fara badan oo cirka maraya iyo xayn maroodiyaal wareegaya ayaa shaki la’aan ah. mid ka mid ah waaya-aragnimada ugu xusuusta badan ee aad ku yeelan karto Botswana.
Chobe wuxuu caan ku yahay joogitaanka badan ee maroodiyaasha, gaar ahaan galabtii xilliga qaboobaha markay aadayaan inay cabbaan, kuwaas oo ilaa 2.000 oo tijaabo ah lagu arkay saacado yar gudahood. Sidoo kale shimbiraheeda, oo in kabadan 400 nooc oo kaladuwan ladilay. Si kastaba ha noqotee, Hippos, yaxaasyada, otters, gisi, giraff, iyo zebra ayaa sidoo kale ku nool Beertan Qaranka. Waxa kale oo jira tijaabooyin waaweyn oo libaax, shabeel, haramacad iyo waraabe.
Sida loo tago: Muwaadiniinta Midowga Yurub uma baahna fiiso ay ku galaan Botswana, waxaan kugula talineynaa in booqdayaashu ay naftooda ku wargeliyaan arrintan inta aysan safarka bilaabin.
Luqad: Ingiriis iyo Setswana.
Lacagta: Pula. Doolarka Mareykanka iyo Euro waa lacagaha ugu fudud ee la isweydaarsado, waxaa laga aqbalaa bangiyada, sarrifka guryaha iyo hoteelada la oggol yahay. Inta badan hoteelada, maqaayadaha, dukaamada iyo shirkadaha safari ee dalka ka jira waxay aqbalaan kaararka amaahda.
Waqtiga booqashada: Waqtiga ugu wanaagsan ee la booqdo Botswana waa Abril ilaa Oktoobar.
Amniga: Botswana waa dal amni ah oo lagu noolaado ama la booqdo laakiin waa inaad marwalba qaadataa taxaddarrada caadiga ah ee ay tahay inaad ka dhigato meelo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Afrika » Botswana
Safarka Jasiiradaha Cayman